စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ မုဒိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အထောက်အထားတွေ ထွက်လာပြီ
Cristiano Ronaldo နဲ့ Mayorga တို့ လျှို့ဝှက်ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ စာချုပ်ထွက်ပေါ်လာပြီ
9 Oct 2018 . 6:56 PM
ဂျာမန်နာမည်ကျော် မဂ္ဂဇင်းဖြစ်တဲ့ Der Spiegel ဟာ စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo နဲ့ မာယော်ဂါ Mayorga တို့ လျှို့ဝှက်ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ စာချုပ်ကို တရားဝင် လူသိရှင်ကြားဖွင့်ချလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတုန်းက Las Vegas မြို့မှာရှိတဲ့ ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုက မုဒိန်းကျင့်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး မာယော်ဂါက စွပ်စွဲထားသလို အဲဒီကိစ္စကို ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောဖို့ နှုတ်ပိတ်ခအဖြစ် ပေါင်(၃)သောင်းနီးပါး ပေးခဲ့သလို ရှေ့နေတွေရှေ့မှာပဲ နှစ်ဦးသဘောတူ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တယ်။
စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ မာယော်ဂါကို ကျူးလွန်ခဲ့ပြီး (၁)နှစ်ကျော်အကြာ ၂၀၁၀၊ ဇူလိုင်လ (၁၂)ရက်မှာ အခုလို စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်သလို (၇)ရက်အကြာမှာ နစ်နာကြေးပေးမယ်လို့လည်း သဘောတူညီခဲ့တယ်။ အဲဒီစာချုပ်ထဲမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ အမည်ရင်း မထည့်ထားဘဲ ‘Topher’လို့ အမည်လွဲထားပြီး မုဒိန်းမှုကျူးလွန်သူဟာ နာမည်ကြီးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဆိုတာရယ်၊ အားကစားသမားတစ်ဦးဆိုတာရယ်သာ ပါဝင်ခဲ့တယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့အတွက် အခိုင်အမာပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး အေးဂျင့်တွေ၊ ရှေ့နေတွေ၊ သီးသန့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးတွေပါ အသိသက်သေခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
Der Spiegel ရဲ့ ဖော်ပြချက်ထဲမှာ “အဲဒီအချိန်တုန်းက Ms.C (မာယော်ဂါ အမည်လွဲ)ဟာ အော်ဟစ်တာတွေ လုပ်ခဲ့လား”လို့ မေးမြန်းခဲ့တော့ စီရော်နယ်လ်ဒိုက “သူမဟာ ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့”ဆိုပြီး ခဏခဏပြောခဲ့တယ်ဆိုပြီး ပြောဆိုခဲ့တာတွေကိုလည်း ဖွင့်ချထားပါတယ်။
အဲဒီစာချုပ်မှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုကိုယ်တိုင် တရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး Der Spiegel မဂ္ဂဇင်းဘက်ကတော့ “ဒီစာချုပ်ဟာ အစစ်အမှန်ဟုတ်ပါ့မလားဆိုပြီး နည်းနည်းလေးတောင် သံသယ မရှိပါနဲ့၊ အခုဆိုရင် စီရော်နယ်လ်ဒိုတို့ဘက်က ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာကန့်ကွက်မှုမှ မလုပ်သေးပါဘူး”လို့ အခိုင်အမာကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်။
စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ မာယော်ဂါတို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကတော့ တဖြည်းဖြည်း ပိုအသက်ဝင်လာပြီး စိတ်ဝင်စားစရာလည်း ကောင်းလာပါပြီ။ ဒီဇာတ်လမ်းက ဘယ်လိုအဆုံးသတ်မလဲဆိုတာတော့ . . .
Cristiano Ronaldo နဲ့ Mayorga တို့ လြှို့ဝှကျခြုပျဆိုခဲ့တဲ့ စာခြုပျထှကျပျေါလာပွီ
ဂြာမနျနာမညျကြျော မဂ်ဂဇငျးဖွဈတဲ့ Der Spiegel ဟာ စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo နဲ့ မာယျောဂါ Mayorga တို့ လြှို့ဝှကျခြုပျဆိုခဲ့တဲ့ စာခြုပျကို တရားဝငျ လူသိရှငျကွားဖှငျ့ခလြိုကျပွီဖွဈပါတယျ။ ၂၀၀၉ ခုနှဈ၊ ဇှနျလတုနျးက Las Vegas မွို့မှာရှိတဲ့ ဟိုတယျတဈခုမှာ စီရျောနယျလျဒိုက မုဒိနျးကငျြ့ခဲ့တယျဆိုပွီး မာယျောဂါက စှပျစှဲထားသလို အဲဒီကိစ်စကို ဘယျသူ့ကိုမှ မပွောဖို့ နှုတျပိတျခအဖွဈ ပေါငျ(၃)သောငျးနီးပါး ပေးခဲ့သလို ရှနေ့တှေရှေမှေ့ာပဲ နှဈဦးသဘောတူ စာခြုပျခြုပျဆိုခဲ့တယျ။
စီရျောနယျလျဒိုဟာ မာယျောဂါကို ကြူးလှနျခဲ့ပွီး (၁)နှဈကြျောအကွာ ၂၀၁၀၊ ဇူလိုငျလ (၁၂)ရကျမှာ အခုလို စာခြုပျခြုပျဆိုခဲ့တာဖွဈသလို (၇)ရကျအကွာမှာ နဈနာကွေးပေးမယျလို့လညျး သဘောတူညီခဲ့တယျ။ အဲဒီစာခြုပျထဲမှာ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ အမညျရငျး မထညျ့ထားဘဲ ‘Topher’လို့ အမညျလှဲထားပွီး မုဒိနျးမှုကြူးလှနျသူဟာ နာမညျကွီးလူပုဂ်ဂိုလျတဈဦးဆိုတာရယျ၊ အားကစားသမားတဈဦးဆိုတာရယျသာ ပါဝငျခဲ့တယျ။ စီရျောနယျလျဒိုဟာ စာခြုပျခြုပျဆိုဖို့အတှကျ အခိုငျအမာပွငျဆငျခဲ့ပွီး အေးဂငျြ့တှေ၊ ရှနေ့တှေေ၊ သီးသနျ့ စုံစမျးစဈဆေးရေးမှူးတှပေါ အသိသကျသခေျေါခဲ့ပါသေးတယျ။
Der Spiegel ရဲ့ ဖျောပွခကျြထဲမှာ “အဲဒီအခြိနျတုနျးက Ms.C (မာယျောဂါ အမညျလှဲ)ဟာ အျောဟဈတာတှေ လုပျခဲ့လား”လို့ မေးမွနျးခဲ့တော့ စီရျောနယျလျဒိုက “သူမဟာ ဒီလိုမလုပျပါနဲ့”ဆိုပွီး ခဏခဏပွောခဲ့တယျဆိုပွီး ပွောဆိုခဲ့တာတှကေိုလညျး ဖှငျ့ခထြားပါတယျ။
အဲဒီစာခြုပျမှာ စီရျောနယျလျဒိုကိုယျတိုငျ တရားဝငျလကျမှတျရေးထိုးထားပွီး Der Spiegel မဂ်ဂဇငျးဘကျကတော့ “ဒီစာခြုပျဟာ အစဈအမှနျဟုတျပါ့မလားဆိုပွီး နညျးနညျးလေးတောငျ သံသယ မရှိပါနဲ့၊ အခုဆိုရငျ စီရျောနယျလျဒိုတို့ဘကျက ဒါနဲ့ပတျသကျပွီး ဘာကနျ့ကှကျမှုမှ မလုပျသေးပါဘူး”လို့ အခိုငျအမာကို ထုတျပွနျကွညောခဲ့တယျ။
စီရျောနယျလျဒိုနဲ့ မာယျောဂါတို့ရဲ့ ဇာတျလမျးကတော့ တဖွညျးဖွညျး ပိုအသကျဝငျလာပွီး စိတျဝငျစားစရာလညျး ကောငျးလာပါပွီ။ ဒီဇာတျလမျးက ဘယျလိုအဆုံးသတျမလဲဆိုတာတော့ . . .